Kuwa ugu quruxda badan Inta lagu jiro
La dagaalanka cudurka cusub ee loo yaqaan 'pneumonia virus pneumonia', maareeyaha guud Li Jiaxiang wuxuu u horseeday dhamaan shaqaalaha Huai'an Zhongxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd. inay si firfircoon uga jawaabaan baaqii guddiga xisbiga degmada iyo dowlada. Maaddaama ay tahay shirkadda kaliya ee soo saarta maaskaro caafimaad ee magaaladeena, ...
Weli waxaad u isticmaashaa suufka lagu daweeyo nabarrada? Huai'an ZTE Pharmaceutical "Ayaa Kuu Soo Bandhigay Halbeegga Cunnooyinka cudbiyeedyada cudbiyeed ee cudurada aan nadiifka ahayn"
Maaddaama ay tahay shey muhiim u ah guriga, suufka suufku waa mid aad u habboon in la isticmaalo, haddii ay tahay aalad farshaxan oo lagu hagaajinayo faahfaahinta inta lagu jiro qurxinta, ama aaladda caawinta ee jeermiska iyo tirtirka boomaatada inta lagu jiro daaweynta dhaawaca. Gaar ahaan marka aad wajaheyso nabarrada ama dhibaatooyinka maqaarka cambaarta, si looga fogaado secon ...
Maaskarada, ku fahan heerarka
Waqtigan xaadirka ah, dagaal ka dhan ah oof wareenka oo uu sababay cudurka coronavirus-ka cusub ayaa bilaabmay. Maaddaama ay tahay "safka ugu horreeya ee difaaca" ee ilaalinta nadaafadda shaqsiyeed, aad ayey muhiim u tahay in la xidho waji-daboolan oo buuxiya heerarka ka hortagga cudurrada faafa. Laga soo bilaabo N95 iyo KN95 ilaa waji qalliinka caafimaadka, caadiga ...
Suufka jeermiska looga dilaaco, Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Maaskarada Neefsashada, Suufka Caafimaadka, Suunka Kalkaalinta, Maaskaro ka hortagga fayraska,